Akwụkwọ nri | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Akwụkwọ nri
Ikwanye zucchini n'ụlọ: otu esi kwadebe maka oyi, ihe a ga-eme ha
Zucchini bụ ihe oriri na-eri nri bara uru nke nwere ọgaranya vitamin na uto dị mma. Ọ ga-abụ ihe dị mkpa na nri gị, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe oriri na-edozi ahụ dị mma ma dị mma. N'eziokwu, a ga-eri ọtụtụ zucchini zuru ezu n'oge okpomọkụ, ma iji nwee obi uto nke akwukwo nri n'oge nile n'afọ, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ na-akwadebe: nri akwụkwọ nri na salads, marinades na ọbụna jams zucchini.
Kedu etu akwukwo nri a ga-esi kpoo maka oyi
Enweghị ezi vitamin na-emetụta ahụ mmadụ n'oge oyi. Enweghị anyanwụ, akwụkwọ nri ọhụrụ na mkpụrụ osisi na-eduga n'ịkụda usoro nchịkwa, ụkọ vitamin na ihe ize ndụ nke ibute ọrịa ARVI. Otú ọ dị, teknụzụ nke oge a na-eme ka o kwe omume, ọbụna n'oge oyi, iji nweta ọtụtụ ihe bara uru - dịka ọmụmaatụ, sitere na mkpụrụ osisi mịrị amị.
Kedu ihe bara uru ma ọ bụ ihe na-emerụ ahụ
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na onye na-atụgharị anya bụ otu n'ime ndị ikwu kachasị nso nke redips ma ọ bụ radishes nkịtị, mmadụ ole na ole na-eto ya n'ubi ha, ọbụnadị ịma banyere nnukwu uru ọ na-eweta na ahụ. Anyị na-enye anyị ịmara ihe niile nke mgbọrọgwụ a na ohere nke ojiji ya na ọnọdụ dị iche iche nke ndụ.
Achịcha dị iche iche maka oge oyi: 3 ngwa ngwa-ngwa ngwa
Ọ bụrụ na-amasị gị nri mkpọ, ị nwere ike ihu nsogbu nke ịhọrọ nke ite na-emeghe taa, ihe ị ga - achọ cucumber ma ọ bụ tomato, nke akwụkwọ nri ka mma na poteto (ọka, pasta, wdg). Iji kpochapụ ya, ị nwere ike ịkwadebe efere, na-eji akwụkwọ nri dịgasị iche iche na uche.
Kedu ihe bụ ihe oriri na-esi nri ma olee otú ha si baa uru?
Nri ọhụrụ bụ mmalite dị ukwuu nke ụbọchị. Ma ọ dịghị ihe ọzọ nke ahụ bụ nkwenye a nabatara n'ozuzu ya. Ihe ọṅụṅụ ndị a na-egbuke egbuke, tọrọ ụtọ, ahụike, na-atọ ụtọ na uto - anyị nwere obi ụtọ itinye ha na nri gị ma anyị weere na nke a bụ nhọrọ ziri ezi. Otú ọ dị, sayensị adịghị eguzo, nchọpụta ndị na-adịbeghị anya na-ekwukwa na ihe niile adịghị mfe.